Izixeko ezigqibeleleyo zokuthenga: Iindawo ezi-10 eziphezulu zokutyelelwa ngabakhenkethi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Shopping » Izixeko ezigqibeleleyo zokuthenga: Iindawo ezi-10 eziphezulu zokutyelelwa ngabakhenkethi
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • lomhleli • iindaba • Shopping • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukhenketho lokuthenga yinto edumileyo echazwa njengokhenketho lwangoku olwenziwa ngabatyeleli abathenga kubo izinto, ngaphandle kwendawo yokuhlala, sisigqibo sabo sokuhamba. Bafika phi abathengi?
Njengoko inani elandayo labantu linezigonyo ze-covid-19, ukuhamba kuyenyuka kwakhona, abakhenkethi baqala ukubonakala kwizixeko ezininzi kwihlabathi liphela.
Xa uthatha isigqibo ngendawo yokuhamba, izinto ezininzi ziya kudlala ngokuxhomekeka kukhetho kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Kubakhenkethi abafuna amava amahle okuthenga kuhambo lwabo sidwelise ezona zixeko zibalaseleyo zokundwendwela kulo nyaka.
Ukuthenga kwi-Intanethi ngokuthenga ezivenkileni
Izinketho zethu zokuthenga zikhulu ngoku kunanini ngaphambili. Ngelixa abanye abantu bekhetha ukutyelela iivenkile zokwenyani, abanye bayalela iimpahla zabo kunye neenkonzo kwi-intanethi. Uninzi lwabantu, nangona kunjalo, lukhetha ukudibanisa zombini. Si-odola ukutya ukugcwalisa ifriji, isinxibo esitsha somsitho ozayo, kunye nokuhonjiswa kwasekhaya okufana ziprints ukwenza amakhaya ethu ngokobuqu.
Ngee-smartphones, iilaptops, kunye nezinye izixhobo zobugcisa kubomi bethu, i-intanethi ifikeleleka ngokulula yonke imizuzu yobomi bethu. Ngelixa ukuthengwa kwi-Intanethi kuthandwa kakhulu- kwaye kuya kuqhubeka kuyindlela elungileyo kuninzi lweemfuno zethu kunye neemfuno-imfuno yokuthenga ezivenkileni nayo ihlala yomelele.
Yintoni echaza isixeko esihle sokuthenga?
Amava okuthenga atsalela abakhenkethi kwizixeko kwihlabathi liphela. Zonke izixeko zibonelela ngendawo eyahlukileyo, kodwa uninzi lunezinto ezifanayo. Ziqhelekile izixeko ezikhulu, ngeentlobo ngeentlobo zeevenkile ezahlukeneyo kunye nomxube weziko lokuthenga elinamatyathanga amakhulu kunye nezitalato ezithandekayo ezineevenkile zasekuhlaleni.
Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka ekubeni leliphi ilizwe isixeko esikulo, kwaye nokhenketho luvela phi. Iidolophu ezithengwayo zithengisa ezivenkileni ukusuka kwixabiso eliphantsi ukuya kubunewunewu. Amava ngokubanzi abalulekile, nawo. Iindawo ezinje ngeNew York City kunye neParis zibonelela kakhulu ngokubona, kunye nokukhetha okuninzi kokuhlala kunye nokutya.
Ezona zixeko zidumileyo zokuthenga
Abakhenkethi, abathanda ukuthenga, bayaphi? Nazi ezinye zeendawo ezifanelekileyo ngoku.
Izigidi zabakhenkethi zityelela ikomkhulu laseNgilani nyaka ngamnye. Isixeko sibonelela ngamaziko amakhulu okuthenga afana neWestfield, iivenkile zokunethezeka eHarrods, izivumelwano ezilungileyo kwiimarike ezahlukeneyo zezitalato, kunye nevenkile ezininzi ezinomtsalane. Iti, iimpahla, kunye nezikhumbuzo zezinye zezinto ezidumileyo zokuthenga apha. I-Oxford Street kunye neCovent Garden zixakekile kwiindawo zokuthenga.
Abakhenkethi baseHong Kong banamathuba amaninzi okuthenga. Isixeko sineempawu zokugqibela eziphezulu kumaziko amakhulu okuthenga kunye nezinto ezinomdla kwiimarike zetrato. IKowloon yenye yezona ndawo zidumileyo zokuthenga. Abakhenkethi abafuna izisulu baya kuba namathuba amaninzi umzekelo eTempileni Street nakwiJade Market.
Isixeko saseNew York sigcwele izithili zokuthenga, kunye neFifth Avenue yenye yezona zidumileyo. Ukuthenga iifestile kumnandi kakhulu-ngakumbi xa kusondela iKrisimesi kwaye isixeko sigcwele imihombiso. Ilali yaseGreenwich, kwicala elingaseZantsi eMpuma, eSoHo, naseMadison Avenue zonke zinikezela ngamava awodwa okuthenga.
Iindawo zokuthenga ezithandwayo:
Ezi zixeko zilishumi zitsala izigidi zabakhenkethi minyaka le. Uninzi lwaba bakhenkethi bhabhela emakhaya neesuthikheyisi zabo zigcwele kakhulu kunakuqala xa befika.
Ukufumana ezinye iindaba zokuthenga Cofa apha.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 32